Norway ရေကာတာ ကနေဖျော်ဖြေသီဆိုကြတဲ့ တေးဂီတအဖွဲ့ နဲ့အဆိုကျော်တွေ – V | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Norway ရေကာတာ ကနေဖျော်ဖြေသီဆိုကြတဲ့ တေးဂီတအဖွဲ့ နဲ့အဆိုကျော်တွေ – V
Norway ရေကာတာ ကနေဖျော်ဖြေသီဆိုကြတဲ့ တေးဂီတအဖွဲ့ နဲ့အဆိုကျော်တွေ – V
Posted by Kyaemon on Jul 12, 2012 in Arts & Humanities, Education, Entertainment, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel |4comments
A Night under the dam Bands Norway Vocalists
နော်ဝေ က ရေကာတာ တွေကို လုပ်တာ နှစ်ပေါင်း ရာကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်လို့
လူတွေက ရေကာတာ တွေကိုတန်ဘိုးထား တွယ်တာမြတ်နိုး လာ ကြတာ၊
ရေကာတာ တခုမှာဆိုရင် နှစ်စဉ် ဂီတပွဲတော်ကို ကြံကြံဖန်ဖန်ကျင်းပတာ
ဒေသခံ တွေလဲ ရေကာတာ ရှိရာကိုသွားပြီး တပျော်တပါးဆင်နွဲ အားပေး ကြတာ၊
နော်ဝေသီချင်း ရော် အမေရိကန် သီချင်းရော် သီဆို နားသောတဆင် ကြတာ၊
ကျန်စလိုက်ရှိုး ဓာတ်ပုံ နဲ့ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်နိုင်ဘို့ လင့်ခ တွေကိုနှိပ်ပါ
A Night Under the Dam 2006 –aset on Flickr
A Night Under the Dam 2006
The best of Under the Dam –aset on Flickr
The best of Under the Dam
STAUT – “SJÅ SOLE” (OFFISIELL MUSIKKVIDEO)
Frida Ånnevik – Synlige hjerteslag
A Night Under the Dam (behind the scenes) – YouTube
Eikerapen Roots Festival 2005 – YouTube
Movie from Eikerapen Roots Festival 2005.
A Night Under the Dam (NRK 1/2) – YouTube
TV-clip from “A Night Under the Dam” 3. august 2006. The opening of the Eikerapen Roots Festival, Åseral, Norway. Made by NRK/Odd Rømteland.
A NIGHT UNDER THE DAM (NRK 2/2) – YouTube
Green Carnation – Transparent Me – YouTube
come2 ဆိုတဲ့ ပုံထဲက အဆိုတော်လေးက အရမ်းလှတာဘဲဗျား… ဂျစ်မိသွားဘီ
ပဲခူးငလျင် သည် သက်တမ်းနှစ် ပေါင်း ၈ဝ ကျော်လာပြီဖြစ်သော ကြောင့် အဆိုပါငလျင်ပြန်လှုပ်နိုင် ချေရှိ သည့် သက်တမ်း သက်မှတ် ချက်အရ ငလျင်ဘေးဒဏ်နှင့်ပတ် သက်ပြီး အသင့်ပြင်ဆင် ထားကြရန် လိုအပ်ကြောင်း ဘူမိဗေဒ ပညာရှင် ဦးစိုးသူရထွန်း၏ သုံးသပ်ချက်အရ သိရသည်။ ငလျင်ဆိုသည်မှာ မည် သည့်အချိန်ကာလ တွင်လှုပ်ခတ်မည် ကို အတိအကျ ခန့်မှန်း၍မရကြောင်း၊ ငလျင် လှုပ်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ရရှိ ခဲ့သောအချက် အလက်ပေါ်မူတည် ပြီး သက်တမ်း ခန့်မှန်းမှုသည် နှစ် ပေါင်း ၁၀ဝ သက်တမ်း တွင်တစ် ကြိမ်ပြန်လှုပ်တတ်ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
“ဒါရိုးရိုးလေးပါပဲ။ ဘယ်အချိန် လှုပ်နိုင်လဲဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေကအမြဲ တမ်းရှိတာပဲ။ ပုံမှန်ပါပဲ။ ပဲခူးငလျင် က အခုနှစ် ၈ဝ ဆိုတော့ ပြင်ဆင် သင့် တာတွေကို သက်ဆိုင်ရာတွေ ရော၊ ပြည်သူ တွေပါ အသင့်ပြင်ဆင် ထားတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ငလျင်ဆို တာ ဘယ်အချိန်လှုပ်မယ်လို့ ဘယ် လိုမှမ သိနိုင်ပါဘူး။ အခုပဲခူးငလျင် လည်း ရက်၊ လတွေအတိအကျနဲ့ ခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က ပြင်ဆင် ထားဖို့လိုတာကိုပဲပြောတာ” ဟု ၎င်းကပြောကြားသည်။
“စိုးရိမ်မယ် ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ် သင့်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာအဆောက် အအုံတွေကလည်းများ၊ လူနေထူထပ် မှုလည်းမြင့်မား တော့ ဖြစ်လာခဲ့မယ် ဆိုရင် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများနိုင် ချေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ငလျင်နဲ့ပတ် သက်ပြီးရှိပြီး သား အဆောက် အအုံ တွေကြံ့ခိုင်မှုရှိ၊ မရှိပြန်စစ် သင့်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြား သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ငလျင်အပြင်း ထန်ဆုံးသော အားရှိသည့်ငလျင်ဇုန် များသည် ပဲခူး၊ ဖြူး၊ မန္တလေး၊ စစ် ကိုင်း၊ တကောင်း၊ ပူတာအို၊ တနိုင်း နှင့်ကလေး- ဟုမ္မလင်းဒေသများဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
(Think Tank ဆိုတာလက်ခံပါတယ်၊)ဖြစ်နိုင်တာက စရအောင်ဆိုတော့ နိုင်ငံကြီးတွေကသူတို့ကြတော့
လုပ်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှာ…ဘာဖြစ်မှာဒါဖြစ်မှာ ဆိုပြီးပြောတာကို
ခဲ့တာလား၊နေ၊လေ စွမ်းအားတွေစသုံးခဲ့တာလား။ သဘာဝဘေးကြောက်ရင်…ကမာ္ဘဦးကျောက်ခေတ်မှာဘဲ